TeamViewer ကိုအသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း - Software Guide
Home / TeamViewer / TeamViewer ကိုအသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း
TeamViewer ကိုအသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း Reviewed by Ko Lin on 12:27:00 PM Rating: 5
TeamViewer ကိုအသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း
Ko Lin 12:27:00 PM TeamViewer
မင်္ဂလာပါဗျာ ..လင်း Page မှာရော့ Chat Cbox မှာရော့ ဒီပို့လေးကို တောင်းဆိုထားကြတဲ့ အဝေးရောက် သူငယ်ချင်းတွေအတွက် TeamViewer ကိုအသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီပို့လေးကို တင်ရန်အတွက် နည်းပညာကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အကူအညီပေးသော လင်း ချစ်ညီလေး He Ro ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..
(၁) TeamViewer ကို ကွန်ပျုတာထဲ့မှာ Install ပြုလုပ်ထားပါ။
(၂) TeamViewer ကို အသုံးပြုရန်အတွက် နှစ်ယောက်စလုံးမှာ Online ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
(၃) ဝင်ကြည့်ရှုပေးမယ့် ကွန်ပျူတာက TeamViewer ရဲ့ Your ID နဲ့ Password ကို သိနေဖို့ လည်း လိုအပ်တယ်။အောက်မှာ ID နဲ့ Password ထည့်နည်းလေးပါ...အခု တွေနေရတာကတော့ ID ထည့်နည့် ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ID နံပါတ် ၉ လုံးကို ထည့်ပြီ. Comput to Partner ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.....
Password ထည့်ရန်အတွက် ဘောက်လေး တက်လာရင်တော့ Password နံပါတ် လေးလုံးကို ထည့်ပြီးရင်တော့ Log on ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..ဝင်ကြည့်ရှုပေးမယ့် ကွန်ပျူတာ ဝင်ရောက်သွားပြီ..
ဒါဆိုတော့ အဝေးက သူငယ်ချင်းတွေကို မိမိတို့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အပြန်အလှန် Software Folder တွေကို Copy ကူး ပြီး Paste ပို့ပေးနိုင်သလို့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုပေးမယ့် ကွန်ပျူတာကလည်း မိမိ ဆီကို Copy ယူ ပြီး Paste ရယူနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် Install လုပ်ပေးပြီး အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါ ဝင်ရောက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Online ရှိနေရုံလေးနဲ့ ကွန်ပျုတာ ဆိုင်ရာ သင်နိုင်ပါပြီ..။ TeamViewer ရဲ့ ကိုအသုံးပြုနည်း ကို အောက်မှာ Video လေးမှာ Install ပြုလုပ်နည်း ။ ID နဲ့ Password ထည့်နည်း ။ဘယ်လို့ ဝင်ရောက်ပြီ. အသုံးပြုနည်းတွေကို အသေးစိတ် ပြုလုပ်နည်းတွေကို Video မှာ ကြည့်ရှုပေးပါရန်...